Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): August 2013
Kachin Movie (the first of Malaysia Kachin DVD movie)
at 8/31/2013 08:04:00 PM
Malaysia hta shanu nga ai anhte Jinghpaw Wunpawng ramma ni jawm shakut let galaw da ai Kachin DVD movie re. n gun jaw la ga.
hkrak sai.Kabu ai,Moi shawng de 2002-2003 hta Malaysia na ( sumtsaw laru ) ngu ai sumla hkrung gayat na hkyen yu sai,rai tim dai ten shing ni﻿ hpa ji lam hta ra rawng ai lam nga majaw nlu shabyin ai.ya na zawn ta tut shakut ai ram ma ni hpe n gun jaw ga ai law
Sumtsaw laru gaw : Wunpawng malaysia bu niamaigan tsin yam lam rai nga ai.
ya na zawn kung hpan ai ni nga sai re majaw ( sumtsaw laru ) sumla hkrung bai gayat lu na matu n gun jaw nngai law.
By: Hugawng media
American mungdan Yale University hte Florida University kaw hpaji hka ja nga ai Jinghpaw Wunpawng Jawng ma ni hte hkrum zup ai lam
at 8/31/2013 10:16:00 AM
Kachin Partnership program'( JKBC )
American mungdaneshanu nga ai Jinghpaw wunpawng ramma ni Kanu mungdan Madu buga de nhtang wa nna hpaji jaw pawn ba lakawn la ai lamang,
Ndai lamang gaw shawng nnan lang na USA dakkasu jawng ma, ram ma ni kaw na Kanu mung dan Kachinland de sadu kawan ai lam re .
Ndai zawn byin tai wa lu ai gaw Florida Jackson Ville Jinghpaw Wun pawng Hka lup Naw ku hpung ( JKBC )ashkut shaja Karum shing tau madi shadaw ai lamamajaw byin tai wa lu ai lam rai nga ai.JKBCaKachin Partnership program hta
(A) Mai gan mung dan nga kaba wa ai JWP ram ma ni hte Kanu mung dan Kachinlandenga ai ni shada tsaw ra hku hkau let lam shagu hta Mung kan madang dep ai hku nna shakut shaja kalu kaba sa wa na lam,
(B) Maigan Mungdan Nga kaba wa ai JINGHpaw Wunpawng ram ma ni Madu mungdan,buga hpe n malap ai sha grau chye na wa na lam,
(C) Amyu Htung hking ,Sut masa,mung masa,Karai Makam masham masa lam amyu myuamatu yaw shada ai lam chye lu ai.
Buga de wa ap nawng ai Dak kasu jawng ma ni hte hkrum shaga ai lam:
Ya na zawn nan hte hpaji shakut nga ai ram ma ni buga de wa ap nawng ai shiga na lu majaw ( JKBC hte USA mungdaneshanu nga ai ) an hte Jinghpaw wunpawng myu sha ni yawngamalai ngai hku nna grai arawng la, shakawn shagrau sai law.shawng nnan lang na galaw sa wa ai lam re majaw yawngamatu kasi la mai lam mung rai sai,
shachyen ai lam:
Sha ga mying,Asak, Dai daw buga ,Ya shanu nga ai mung dan hte hpaji hkaja nga ai lam chye ju hte tsun dan rit.
Jawng Ma :
Shaga mying gaw Jap Ja Ngai Awng ,asak gaw 19 ning ,20 ning de shang wa sai,Dai daw buga gaw Myitkyina Shatapru,Ya du nga ai gaw USA mung dan Florida re.Hpaji hkaja nga ai gaw Yale University ,Major : Political Science and Judaic Stuies ,KaweMung masa hpaji hpe sharin nga ai4ning rai sai.
Jap Bura Lu gaw nye kanau re,University of Florida KaweTelecommunication hpaji sharin nga ai2ning rai sai.
Kanu mungdanekade ram na hkra wa nga nna,gara shara kaw ap nawng mugun ai lam,Mahkrum madup ,Hkam la,yinla,mumada ai lam ni tsun dan rit.
Kanu mungdane2013 ning laimat wa sai shata2ram Kanu mung dan de sadu ap nawng sai hku re.Shara, location gaw KTC Nawng nang Chyum Dak kasu kaw rai nna,Myitkyina Kachin Baptist Association: youth committee ni hte hkrum zup ai lam mung nga sai.
- jawng ma 200 daram hpe sharin wa ai
- MSE (Masters of Divinity, Special English). A hte B class lahkawng yan hpe English Communication Skills sharin ai. Special English ngu ai gaw MDiv first year nlung shi yang English loi mi naw gram ra ai nga ai ga re. A class kaw jawng ma 40 daram, B class kaw jawng ma 40 daram nga ai. class gaw bat mi hta 1 lang2hours 40 minutes sharin ai.
- BSE (Bachelor of Theology, Special English). English Communication Skills sharin wa ai. Jawng ma 40 daram nga ai. class hours/frequency same as MSE.
- BTh 3rd year (Bachelor of Theology 3rd year). A hte B class lahkawng yan hpe Academic Writing sharin ai. A class kaw jawng ma 26, B class kaw jawng ma 26 nga ai. bat mi hta 1 lang,2hours sharin ai.
- BATS (Bachelor of Arts in Theological Studies). English Communication Skills sharin wa sai. jawng ma 12 nga ai. batmi hta 1 lang,2hours sharin ai.
Hkam la ai lam:
WP sha langai hku na gaw tinang dangdi dangdap ai hku nna tinang tsawra ai dik ai amyu hpe garum madi shadaw na lit anhte yawng kaw nga ai ngu na hkam la da ai. Dai majaw ngai hku na gaw ap nawng na ahkaw ahkang lu ai, tinang gaw tinang na amyu sha ni hpe garum shingtau ai lam kaw tsap lu ai majaw grai ma kabu ai, Karaiachye ju hpe mung ndang tsun hkra shakawn nngai. Ngai na lit hpe maga mi hku na shadik shatup ai lam re ngu na hkam la ai.
Mumada ai lam:
Wunpawng myu sha ni hte seng na gaw lam shagu hta grai naw shakut ra ai ngu mu ai. Grau nna hpaji hte seng na, tsawm ra myi naw hpang hkrat taw ai ngu mu ai. Dai hta n-ga hpaji hpe WP ramma ni grai sharawng shara let hkaja taw ai lam hpe nau nmu lu ai hku re. Hpaji gaw manu dan ai nga ai chye ai. Raitim tatut gaw manu shadan let hkaja tam ai lam nnga ai daram re ngu mu ai.
Yinla ai lam;
Dai majaw ngai hku na gaw hpaji hpe madung da let WP amyu sha niarawt jat galu gaba lam kaw ngai dangdi dangdap ai hku nna shanglawm ra ai ngu yin la da ai.
Hkamsha ai lam:
Ngai gaw asak grai naw kaji ai7ning ram kaw na maigan de buhtawt nna USA ga nga kaba wa ai re.ya na zawn tinang mungdan buga de bai nhtang wa yu yang ,nyeamyu ,nyeamung dan Hpe ngai grai pawn ba la ra sai,Myu tsaw mung mung tsaw myit ni grau rawt jat wa ai zawn hkam sha ai.An hte maigan nga ai ni majoi hkum lagawn nga sa nmai sai,Mungdan shagu na ramma ni hpaji shakut nna buga de lawan wa ap nawng daw jau ra sai.An hte hpe, Karai kasang gaw ning shawng share hku nna dat dat ai re, yawng hpe hkye la na matu ahkaw ahkang lu ai mung dan hta nmau nga ai sha lawan shakut hka ja la nna tinang Myu hte mungdanamatu ap nawng ra sai ngu hkam sha wa nngai law.
Yana zawn nrau nhtau hpaji shakut kyin taw ai ten kaw na yawng chye lu na matu tsun sang lang dan ai ,Jap Ja ngai awng hte Jap Bu ra lu hpe Grai chye ju dum ga ai law.
ten lu yang daw II hku nna USA kaw hpaji hkaja la yang na Mahkrum madup ni hpe san htai naw galaw na ga ai,Chye ju kaba sai.
at 8/30/2013 08:53:00 AM
Sinpraw ka ang shing ra mungdan niamang hkang sumla-
Read more+++++click on link+++
at 8/29/2013 08:47:00 AM
ဆီးရီးယားကို နွယ်ပြီး အီရန် ကို ဘယ်ပြ၊ ညာကစ် ချေမှုန်း တော့မည်လော
သြဂုတ်လ ၂၈၊ ၂၀၁၃။
မကြာမီပင် ဘရှရ်အယ်လ် အာဆတ် အုပ်ချူပ်နေသော ဆီးရီးယား နိုင်ငံ ကို အမေရိကန် ဦးဆောင်သော နေတိုး မဟာမိတ် နိုင်ငံများက စစ်ဝင်တိုက် ရန် သေချာ သလောက်ဖြစ်နေပြီ။ ဘရှရ် အယ်လ် အာဆတ် ၏ ဆီးရီးယား အစိုးရ တပ်များဖက် မှ အခိုင်မာဆုံး မဟာမိတ်နိုင်ငံ မှာ အီရန် နိုင်ငံဖြစ်သည်။
အဆုံးတစ်နေ့ ဆီးရီးယားကို အနောက်နိုင်ငံများ က တိုက်ခိုက်လာသော အခါ အီရန် သည် ဆီးရီးယား ဖက်မှ မီးကုန်ယမ်းကုန် ၀င်ရောက် ပံ့ပိုးကူညီ ပေးမည် ဆိုသည်ကို သံသယ ဖြစ်စရာ မလိုလောက်အောင်ကျိန်းသေနေသည်။ အီရန် တို့တွင် တိုက်ချင်း ပစ် ဒုံးပျံစနစ် (Ballastic Missile System) များကိုလည်း ပိုင်ဆိုင် ထားသည့်အပြင် အနုမြူလက်နက် စီမံကိန်း မှာလည်း အတော်လေး ခရီးပေါက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန် အပါအ၀င် အားလုံးက လက်ခံထားသည်။
တစ်ဖက်ကလည်း အမြင်နောက်တစ်မျိူး နှင့် ကြည့်မည် ဆိုပါက အီရန်တို့ အနုမြူ လက်နက် စီမံကိန်းကို ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘဲ တွန်းလုပ်နေသည် အတွက် အမေရိ ကန်၊ အစ္စရေး၊ ဥရောပ နိုင်ငံများ၊ ဆော်ဒီ အပါအ၀င် ပင်လယ်ကွေ့ ဆွန်နီအာရပ် နိုင်ငံများ ကလည်း လုံးဝ ကို စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်နေသည် မှာ သိပ်ကျိန်းသေ သည်။ နှုတ်က ထုတ်မပြောသော်လည်း အကယ်၍ အီရန်တို့အား စစ်ရေးအရ ၀င် ရောက် တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီး ၎င်း တို့၏ အနုမြူစီမံကိန်း ကို ရပ်တန့်လိုက် နိုင်သည်ဆို က အထက်ပါ နိုင်ငံအားလုံး သည် စိတ်သက်သာ ရာ ရသွားကြပေမည်။
အီရန်တို့ ညူးကလီးယားအစီအမံ မျာကို စွန့်လွှတ်ရန် အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှား၊ တရုတ် စသည့် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင် ငါး နိုင်ငံနှင့် ဂျာမနီ တို့် ပါဝင်သည့် (G5+1) အုပ်စု ၏ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ စပြီး သံတမန်ရေးရာ လမ်း ကြောင်းဖြင့် ကြိုးပမ်းနေမှု များ မှာ လည်း ဘာအရာမှ မထင်လှ။
သို့သော်ပြဿနာ က အီရန် ကို အသားလွတ်ကြီး စစ်ငင် ပြီး ၀င်တိုက်ဖို့ရာ က နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး နယ်ပယ် တွင် မဖြစ်နိုင်သလောက်နီးပါး ကိစ္စ ဖြစ်သည်။ ခက်ခဲသည် ထက် ပိုနေသည်။ ယခု ဆီးရီးယား နှင့် နွှယ်သည့် ကိစ္စ မှအပ အသား လွတ် ရန်စ နိုင်စရာ အကွက်ကား ရှာမတွေ့။
သို့ဖြစ်ပေရာ ယခု ဆီးရီးယား ပဋိပက္ခ ကို အကြောင်းပြုပြီး ၀င်ပါလာမည့် အီရန် ကို အပြုတ်နှံတော့မည် လား ဆိုသည်မှာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာသည်။ ထိုသို့ အလုံးစုံ စစ်ကြီး ဖြစ်လာမည် ကို အမေရိကန် မှ စစ်ဆန့်ကျင်ရေး အုပ်စုများ ကလည်း ခါးခါး သီးသီး ကန့်ကွက် နေကြသည်။
အကယ်၍ ထိုဒေသ တွင် အလုံးစုံ စစ်ပွဲကြီး ဖြစ်လာပါ က နကိုယ်ကမှ ချိနဲ့ နေသည့် အမေရိကန် စီးပွားရေး ကိုလည်း ကြီးမား သော သက်ရောက်မှု ရှိလာ စေမည် ဖြစ် သည်။ ယခု တစ်ဂါလံကို ပျမ်းမျှ ၃ ဒေါ်လာ နှင့် လေး ဒေါ်လာ အကြားတွင် သာ ရှိနေ သည့် အရပ်သုံး ဓါတ်ဆီဈေး မှာ ထိုသို့ဖြစ် လာသည် ဆိုသည် နှင့် ၈ ဒေါ်လာ ၉ ဒေါ် လာ ခန့် တက်သွားနိုင်ချေ ရှိနေရာ သာမန်ပြည်သူ အများစု မှာလည်း လက်ခံ နိုင်ကြ လိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။
မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ အီရန် တို့ အနုမြူလက်နက် ထုတ်လုပ် ရန် ကြံစည်နေသည့် စီမံ ကိန်း ကိုလည်း ကာလရှည် လျစ်လျူရှု ထား၍ကား မရနိုင်ပေ။ သမ္မတ အိုဘားမား အတွက် ဆုံးဖြတ် ချက် တစ်ခုခု ချရန် လွန်စွာပင် ခက်ခဲ သည့် အနေအထားပင် ဖြစ်သည်။ မဖြစ်မနေ စစ်တိုက်ရတော့မည် ဆိုက စစ်ပွဲကို ရေရှည် အထိ ဆွဲမသွားဘဲ တိုတိုတုတ်တုတ် လက်စသိမ်း နိုင်ဖို့က အသက်တမျှ အရေးပါနေသည်။
ထိုသို့ဆိုလျှင် စစ်ဇုန် ဖြစ်လာမည့် ဆီးရီးယား နှင့် အီရန် ပတ်ဝန်းကျင် တွင် အခြေ ဆိုက်ထားနိုင်သည့် အမေရိကန် စစ်အခြေစိုက်စခန်း များ က အဆုံးအဖြတ် ပြုမည့် အနေအထား တွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်။
အောက်ပါပုံတွင် အစိမ်းရောင် အီရန် နိုင်ငံ ၏ ပတ်ပတ်လည်တွင် ပုလဲကုံး သဖွယ် ၀န်းရံ ထားသည့် အမေရိကန် စစ်အခြေစိုက် စခန်းများကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ စုစု ပေါင်း စစ်အခြေအစိုက် စခန်းပေါင်း ၄၅ ခုတိတိရှိနေသည်။
စစ်ဖြစ် လာပြီး ဆိုသည်နှင့် လူသူ၊ လက်နက်ခဲယမ်း၊ ရိက္ခာ စသည့် စစ်ပွဲအတွက် မရှိမဖြစ် အ ရေးပါ သည့် အင်အားစုများအား အချိန်တိုတို အတွင်း စစ်ဇုန်ထဲ သို့ သွန်အောချ နိုင် ရန် ထိုကဲ့ သို့ စစ်အခြေစိုက် စခန်းကြီး များ ၏ အရေးပါမှု က သိပ်ကို အရေးကြီး သည်။
အချက်အလက် အလုံးစုံကို ထောက်ချင့်ကြည့်ပါက သည်တစ်ချီတွှုင် အမေရိကန် နှင့် အ နောက်နိုင်ငံ များသည် အီရန် လက်နက်စွမ်းပကား စနစ် ကို အပြုတ်နှံ တော့မည် လား ဆိုသည်မှာ သိပ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှသည်။ စောင့်ကြည့်ရမည်ပင်။
photo credit : Occupy Wall Street
ဒုံးကျဉ်တွေ စစ်ရေးအကြံပေးတွေ နဲ့
port of Tartus ဟာ အရင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု
at 8/29/2013 08:42:00 AM
By: ah pu Facebook
ကျုပ်ညက စစ်ပွဲတွေ အကြောင်းတွေးခဲ့တယ်...
စစ်ပွဲတွေ အကြောင်း အိပ်မက်မက်သေးတယ်...
စစ်ပွဲဆိုတာ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာတဲ့ သူတွေ အတွက်သာဖြစ်တယ်...
စစ်ပွဲဆိုတာ သာမာန်ထက် ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့သူတွေ အတွက်ဖြစ်တယ်...
စစ်ပွဲနိုင်သည်ဖြစ်စေ ရှုံးသည်ဖြစ်စေ ရေရှည်မှာသူတို့အတွက် အကောင်းပဲရှိတယ်...
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စား မဟုတ်ကြတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်
အမေရိကန်နဲ့ မဟာမိတ်တွေ စစ်ပွဲနိုင်ခဲ့တယ်
ဂျာမဏီ နဲ့ ဂျပန် စစ်ပွဲရှုံးခဲ့တယ်
သူတို့တွေ အခုလူစေ့တန်းစေ့နေနိုင်တယ်၊ လူသူလေးစားရတယ်၊၊
သူတို့ ဘ၀တွေ ပိုပြီးတိုးတက် ရင့်ကျက်ခဲ့တယ်၊၊ လွပ်လပ်မှုနဲ့ပိုနီးစပ်လာတယ်
အလုပ်ပိုကြိုးစားဖို့ တွန်းအားဖြစ်လာခဲ့တယ်၊၊ လူပေါ့လူအ ဘိန်းစား ရေသာခိုတွေနည်း
လာခဲ့တယ်၊၊ အစိုးရ ရိုးသားလာတယ်၊၊ ပြည်သူလူထုကို ပိုအားကိုးလာတယ်၊၊ အမှန်
တရားကို မြတ်နိုးခုံမင်တတ်လာတယ်၊၊ စစ်ကို မုန်းတီးရွံရှာလာတယ်၊၊ ဒါဟာ ရေရှည်
အတွက်အကောင်းပဲ၊၊ ဒီတော့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်နေတာထက်စာရင် တစ်နိုင်ငံလုံး စစ်ပွဲဆင်နွဲဖို့က ဒီနိုင်ငံအတွက် အဖြေပဲ၊၊
၂၁ ရာစုနှစ်စစ်ပွဲရဲ့ ပုံစံက တစ်မျိုးတဖုံဖြစ်နိုင်တယ်၊၊
The Best Sniper Rifle of the World ********************************** " CHEYTAC M200 INTERVENTION LRSS-.5 CALIBER " By help of portable Cheytac Target Acquisition Computer (CTAC), you can easily shoot down the Helicopter or any ground target. All required facts and field information are provide by CTAC and all you have to do is pull the trigger.
စစ်ဝါဒီတွေရဲ့ မဟာဗမာ လူမျိုးကြီးဝါဒ ( video click on link )
at 8/29/2013 08:00:00 AM
at 8/29/2013 07:46:00 AM
ထုတ်ဖော်တင်ပြသောနေ့ Thursday, 18 July 2013 23:40
UWSA “ဝ” တပ်ဖွဲ့ပိုင် စစ်သုံးကားကြီးများ
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအပေါ် တပ်မတော်ရဲ့ သဘောထား အမှန်နဲ့ ယခုတလော UWSA တင်းမာရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို တင်ပြသွားပါမယ်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များဟာ ဖက်ဒရယ် တောင်းဆိုနေပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ လက်နက်ကိုင်ဆောင်တဲ့ အနေအထားကို တော်တော်နဲ့ စွန့်လွှတ်မှာ မဟုတ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ အလှမ်းဝေးနေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ စစ်ရုံး ကက(ကြည်း) မှ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ အရာရှိတစ်ဦးက အခုလို ဆိုပါတယ်။
“သူတို့ကိုယ်တိုင်က လက်နက်မရှိရင် အဆိပ်မရှိတဲ့မြွေ ဖြစ်သွားမှာ စိုးရိမ်နေတယ်။ တပ်မတော်ကလည်း သူတို့ကို လက်အောက်ခံ BGF လိုမျိုး သဘောထားချင်တယ်။ ဒါကို တိုင်းရင်းသားတွေက လက်မခံကြလို့ မျဉ်းပြိုင်လို အဆုံးသတ်ဆုံဖို့က သိပ်မလွယ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ KIA အပေါ် တပ်ကနာကျည်းနေပြီး KIA သဘောထား မမှန်ဘူးလို့လည်း ယူဆနေတယ်။ ရွှေလီ ဆွေးနွေးပွဲမှာတုံးက ဖြစ်ရပ်များက သက်သေထူတယ်။ KIA က ငြိမ်းချမ်းရေးကို လိုလားသူ မဟုတ်ဘူးလို့ တပ်မတော်က ယုံကြည်နေတယ်၊ ဒါပေမဲ့ တပ်မတော် အနေနဲ့လည်းဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လုပ်နေတာက နိုင်ငံရေးအရ နိုင်ငံတကာကို သက်သေထူ ပြသနေတာဖြစ်တယ်”
UWSA နဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး စစ်တပ်ရဲ့ သဘောထားကို ဆက်လက် မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
“SSA ခေါင်းဆောင် ယွက်ဆစ် ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော် ရောက်ပြီးမှ UWSA အရေး ထဖြစ်တာဘဲ၊ ဆိုလိုတာက ရှမ်းနဲ့ဝ မတည့်ဘူးဗျ။ ခွန်ဆာ (ရှမ်း) လွယ်မော အဖွဲ့တွေကို တပ်ကတိုက်ခဲ့ရာမှာ မနိုင်လို့ UWSA ကို ဖေါက်တက်ခိုင်းခဲ့တယ်။ မင်းတို့ နယ်မြေလိုချင်ရင် တိုက်ပြီးယူပါလို့ ပြောထားတယ်။ “ဝ” လည်း ရှမ်းကို တိုက်ပြီးတော့ ရင်းနှီးပေးဆပ် ရယူထားခဲ့တာမို့ ဘယ်ဖယ်ချင်မလဲဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ဝ က ဧရိယာ ဆက်ချဲ့လာတယ်။ လွယ်ကောင်းမူ စခန်းဆို ကျွန်တော် သိရသလောက် တပ်မတော်က ကျိုင်းတုံ ဒကစ လက်အောက်ခံ ခမရ (၃၅၉) လို တပ်ရင်းတွေက တက်တိုက်ပြီး သိမ်းခဲ့ရတာပါ။ ဝ အကူအညီ မယူခဲ့ပါဘူး။ သိမ်းပြီးတော့ နယ်မြေ အေးချမ်းသွားတာနဲ့ တပ်က လက်လွှတ်လိုက်တဲ့ စခန်း (၄) ခု လောက်ကို UWSA က တက်ထိုင်တော့ မကောင်းဘူးပေ့ါဗျာ။ ပိုဆိုးတာက “ဝ” ပြည်နယ် တောင်းပြီး စိန်ခေါ်တဲ့ ကိစ္စဘဲဗျ။ ဒါနဲ့ဘဲ ယွက်ဆစ်ခေါ်ပြီး ရှမ်းကိုပြန်တင်တဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် နိုင်ငံရေး ကစားကွက် လုပ်ရတာဘဲဗျ။ ဘယ်အချိန်မှာ ရှမ်းနဲ့ “ဝ” ကို ကုလားဖန်ထိုးဦးမလဲ မသိဘူး။ ယခုတော့ တပ်က သွေးထိုးစမ်းဖို့ လုပ်နေပြီ။ တပ်ချုပ်က တွေ့မယ်လုပ်ပြီးမှ ဦးသိန်းဇော်တို့ကို အရင် Buffer ထိုးခံလိုက်တယ်”
လိုင်ဇာဒေသဧရိယာ အတွင်းသို့ ပစ်ခတ် ဗုံးကြဲခဲ့တဲ့ လေတပ်အခြေစိုက်စခန်း ဌာနချုပ်တစ်ခုအတွင်းရှိ K-8 အမောင်းသင်လေယာဉ်
လက်ရှိ တပ်မတော်ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး တပ်မတော် အရာရှိကြီး (အငြိမ်းစား) ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး တစ်ဦးကို ဆက်လက် မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
“တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေထဲမှာ “ဝ” က တော်တော်မာတယ်၊ လက်ရှိ စစ်တပ် မနိုင် နိုင်ဘူး။ အပျော့ဆုံးဖြစ်တဲ့ ရှမ်းစခန်းတွေကိုတောင် မြောက်ပိုင်းမှာ အသေအကြေ တိုက်ခဲ့ရတုန်းက (ရမခ၊ ရလခ၊ ရပခ) တိုင်း (၃) တိုင်း စလုံးက တပ်တွေ စေလွှတ်ခဲ့ရတယ်။ KIA နဲ့ တိုက်တုံးကလည်း အမြောက်ပစ်ကူနဲ့ မရလို့ လေယာဉ်နဲ့ ဗုံးကြဲနေရတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ တိုက်စွမ်းရည် အရမ်းကျနေပြီ။ တပ်မ (၈၈) ဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံ ပျက်သွားတာဘဲ။ တရုတ်ကလည်း ထောက်ခံမှု ရှိနေလေတော့ UWSA ကို တပ်က မတိုက်ရဲဘူး။ အမေရိကန်ကလည်း စစ်တပ်ကို လုံးလုံးလျားလျား ထောက်ခံအားပေးမှု မရှိသေးတာမို့ ဒီအချိန်မှာ သွားတိုက်ရင် နောက်ကျတဲ့ခြေထောက် သစ္စာဖောက်ဆိုပြီး ဖွဲ့စည်းပုံပျက် စုတ်ပြတ် သွားမှာဘဲ။ အခုက ပါဝါ ကစားပြီး သွေးထိုးစမ်းတာပါ။ “ဝ” က သူ့နယ်မြေ သူအစိုးရ တနယ်တမင်း လုပ်နေလို့ တရားမဝင် “ဝ” နိုင်ငံလို့ ခေါ်ရမလိုတောင် ဖြစ်နေတယ်။ တရုတ် ရုံးသုံးစကားနဲ့ ငွေကြေးသုံးစွဲပုံကိုသာ ကြည့်ပေတော့၊ နောက်ပိုင်းသတင်းအရ ဝ အဖွဲ့က ဦးသိန်းဇော်အဖွဲ့နဲ့ ဆွေးနွေးချက်ကိုတောင် သဘောတူ လက်ခံလိုက် သည်အထိ ဖြစ်သွားတယ်လေ။ ဝ အဖွဲ့တွေက ခွဲမထွက်တော့ဘူး ဆိုပြီး နှပ်ကြောင်း ပေးလိုက်သလို နိုင်ငံအတွက် လှူဒါန်းမယ်ဆိုလို့တောင် အံ့သြမိသေးတယ်။ အစိုးရကလည်း ခပ်ပေ့ါပေ့ါ သဘောတူညီချက်တွေ ရရင်ပြီးရောဆိုပြီး အချိန်ဆွဲလိုက်တဲ့ သဘောပေါ့ဗျာ။
KNO ခေါင်းဆောင် ဒူဝါလရော်
စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား အနေနဲ့ အဲဒီ စစ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိအား ထင်မြင်သုံးသပ်ချက် တောင်းခံရာမှာ - “တပ်မတော်က ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူလိုစိတ် အမှန်တကယ် ရှိပေမဲ့ အချိန်မရွေး ခွဲထွက်သွားနိုင်မဲ့ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့်ကို တစိုက်မတ်မတ် တောင်းဆိုနေတဲ့ တချို့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များရဲ့ ဆန္ဒကြောင့် စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကတော့ အလှမ်းဝေးကွာဆဲ ဖြစ်တယ်။ KIA ဆိုရင် သူ့ရဲ့ကိုယ်ပွား ပြည်ပအခြေစိုက် ကချင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNO) က သီးခြား လွတ်လပ်သော နိုင်ငံအဖြစ် ခွဲထွက်မယ်လို့ မကြာခဏ ကြေငြာနေတာ ကြားနေရတာဘဲ။ ကြံ့ဖွံ့ အကြီးအကဲ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဌေးဦးကတော့ ဖယ်ဒရယ် ကိစ္စဟာ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။ ပေးလို့ရတယ်။ လက်နက် ဆက်ကိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ Sorry ဘဲလို့ ပြောသွားတယ်လေ။ တကယ်တမ်း နိုင်ငံတကာမှာ တပ်မတော်ဆိုတာ တစ်ခုတည်းရှိပြီး ရဲကလွဲလို့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာက တော်တော်နဲ့ဖြစ်အုံးမှာ မဟုတ်ဘူး” လို့ သူ့အမြင်ကို သုံးသပ် ပြောဆိုသွားကြောင်း၊ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Comment: Saiga Brang
at 8/29/2013 07:37:00 AM
Mali hkrang wa lawng...hkrang hka hku yawng hkrap ai n-sen,
Hu Gawng Pa de hkrang hkra, Mali hte n-mai hku,
Myi prwi lwi hkrat taw sai...
Man Maw Sinli, Kuthkai ga jarik jahtum du hkra,
Galoi she moi na zawn sha, Yi sun hkauna nai mam ni hpe,
Myi n-pu hta bai mu na kun...
Oh...Dai ni, Ja Lung seng hte Lung tsit lung hkyeng ma hkra..
Manu dan ai maisak hte hpun kri hpun ru ni yawng, zim wa...
yawng hten wa ma wa...
Tinangashadai lup ai lamu ga hta pyi tinang n-lu nga na zawn,
Wunpawng sha ni, myi n-pu hta matsan mayan....
Wan hkut zawn zawn, Summwi ni zawn
Hkyen bum maling ni, Mai gan amyu lata hta...
hpun marawn ni mung she krin, hpum yup taw sai...
San tsawm la ai Hka shi hka nu lung rawk pyi n-ngam hkra,
ga hta rawng ai ma hkra, manu dan ai ma hkra hpe mung,
myi n-pu hta htu la taw sai...
Hpu nau wa hpa rai mau taw nga ai kun....
Hpu nau wa hpa rai yu taw nga ai kun....
By: fb-Seng Lat Marip
at 8/28/2013 11:32:00 AM
By : RFA www.youtube.com စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီနေတဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသား ကိုဘရန်ရှောင်ဟာ UNESCO အဖွဲ့နဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းတခု တက်ရောက်ဖို့အတွက် အမေရိကန် ပြည်ထောင... ကို ပရန်ရှောင် က ပြောသွားတယ်-- အီ--ဟီ---ဒီ---(သွားဖြဲလျက်) အ ပြောင်းလဲတော့--မရှိဘူးလားဆိုရင် နည်းနည်းတော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအ ပြောင်းလဲက စစ်တပ်က သူတို့လိုချင် တဲ့အ ပြောင်းအလဲကို သူတို့လိုချင် သလို ဖော်ဆောင် နေတယ်လို့ပဲ မြင် ပါတယ်။ ။ ပြည်သူတွေလိုချင် တဲ့ အ ပြောင်း အလဲ မဟုတ်သေးပါဘူး။
at 8/28/2013 11:26:00 AM
at 8/28/2013 09:15:00 AM
Ethnic alliance hammers out political framework before next round of talks
at 8/27/2013 10:46:00 AM
at 8/27/2013 10:05:00 AM
bY-Zaw Wonn Maung
သူများ၊ မန္တလေးမြို့ပေါ်သို့ အရှေ့မြောက်တံခါးမှ…..
၀င်ရောက်လာသူများမှာ… လွယ်လွယ်ကူကူ မှတ်ပုံတင်ရကြ….
နိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့ကြရသည်မှာ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် ကိစ္စဟုပင်ဆိုရ ပါတော့မည်…
မန္တလေး၏ အချက်အခြာကျသော…. နေရာအားလုံးလိုလို…
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးလိုလိုသည် တရုတ် အမျိုးသားတို့လက်တွင်း သို့ကျရောက်ခဲ့သည်မှာ…..
အားလုံးအသိပင်ဖြစ်ပါတယ်…မန္တလေးသားတို့မှာ မြို့စွန်၊ မြို့ဖျား ရေမရ၊ မီးမလာသော ဆင်ခြေဖုံးရပ် ကွက်…
များသို့ လွင့်ပါးသွားခဲ့ကြရသည်မှာလည်း အမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်… အဆိုပါ တရုတ်အမျိုးသားတို့သည် …..
မန္တလေးကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ရောက်ခဲ့ကြသနည်း…….လ၀ကရုံးကလူကြီးတွေ ညဘက်မှာလည့် …..
အိမ်မပြန်ကြပဲ စားကြသောက်ကြ၊ တရုန်းရုန်းနဲ့ ဇယာအိုကညာပျိုတွေနဲ့ ပျော်ပါးနေကြတာ…..
ဒီဝင်ငွေကြောင့်ပဲလို့ နားလည်လိုက်ပါတယ်…. သူတို့ဘယ်လောက်များများ လုပ်သွားကြပြီလဲ…
မြန်မာ စကား မတတ်တဲ့ တရုပ် တယောက်ကို ကသာ မှာ မှတ်ပုံတင် လုပ်ပေးတာ……
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ် ကျော် ထဲက အားလုံးပေါင်း သုံးသိန်း ကုန်ကျ တယ်လို့သိရပါတယ်…
ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ တမျိုးသားလုံး၊ နိုင်ငံသားအားလုံး ဂရုစိုက်၊ အာရုံစိုက်ရမည့် ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်…
ရခိုင်မှာ အစိုးမှ နောက်ခံအားပေးပြီး တရုတ်ပေါက်ဖေါ်တို့ …
အဓမ္မ မြေသိမ်းနေကြသည်မှာ …ရွှေ့ဂက်စ်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်… ရခိုင်တွင်မြေသိမ်းမှုများကို…
မြန်မာနိုင်ငံလုံးရှိ ….ရဟန်းရှင်လူအင်အားက ….ဒေသဆိုင်ရာ ပြဿနာငယ်လေးအဖြစ် ….
သတ်မှတ်ထား၍ မဖြစ်ပါ… တရုတ်ပြည်မှာ တရုတ်များကျောက်ဖြူသို့ ဝင်လာကြပြီပင်ဖြစ်ပါတယ်
ထို့ပြင်မက ကျောက်ဖြူမြို့တွင်….. ရေနက်ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်ရေးအတွက် ….
ကျောက်ဖြူလေယာဉ်ကွင်းသစ် ….ဖောက်လုပ်ရေးရေနံနှင့် ဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းနှင့်….
အပြိုင်မီးရထားလမ်းများကို …တရုတ်ပြည်ရှိကူမင်းမြို့အထိ ဖောက်လုပ်ခွင့် ပေးလိုက်…
တာဟာလဲ…တရုတ်ပြည်မှ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာသို့ တိုက်ရိုက်စစ်ရေးအတွက်…မဟာဗျူဟာ…
နိုင်ငံသားအဖြစ် အတည်ပြုနိုင်ဖို့ ၁၉၈၂ ဥပဒေ….အခန်း (၂) နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း အပိုဒ် (၃) …..
မှာပါဝင်တဲ့ ၁၈၂၃ မတိုင်မီ နေထိုင်ခဲ့သော တိုင်းရင်းသားများနှင့် မျိုးနွယ်စုများသည် ……
နိုင်ငံသားများဖြစ်သည်ဆိုသော အချက်နဲ့ မျိုးဆက်နှစ်ဆက် (သို့) သုံးဆက်ပြီးမှ……
နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရရှိခြင်းဆိုတဲ့ ဧည့်နိုင်ငံသား တစ်ဆင့်ခံထားတဲ့မူတွေအရ…..
စိစစ်ပြီး ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးကို လူ့အခွင့်အရေး ရှုထောင့်က ပေးရမှာဖြစ်သလို…
သက်သေခံ အထောက်အထားမရှိရင်တော့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအတိုင်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်….
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာရောက်အခြေချသူ၊ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်သူ သန်းနဲ့ချီ ရှိပါတယ်။
နောက် ၁၀ နှစ်၊ အနှစ် ၂၀အတွင်း..မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့……
တရားမ၀င် ၀င်ရောက်သူ သန်းဆယ်ဂဏန်း ရှိနိုင်ပြီး …..အဲဒီကမှပေါက်ဖွားသူ…..
ကိုယ်ကျိုးရှာတတ်တဲ့သူတွေ…ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်… ဒီကိစ္စတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ …
မှားယွင်းမှုတွေအတွက် သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို…..
အိမ်ခြံမြေလေလံမှာ… တစ်ယောက်တည်း…. ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ ဖိုး…..
ဆွဲသွားတာ မျိုးတွေရှိတယ်…..ဒါတွေ က ၀င်ငွေရလမ်း…. ဖော်ပြပြီးသားငွေ တွေလား၊….
ပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်တွေက…အမည်ခံပြီးဆွဲတာလား၊…. ဘယ်သူမှ လည်း မသိဘူး…..
အိမ်ခြံမြေဈေးတွေက တော်တော်လေး….တက်သွားတာ လုပ်ပြီးတက်တာလား…..
ပုံမှန်မဟုတ်ရင် တန်ပြန်သက်ရောက်မှု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်….ဘယ်လိုမျိုး..သက်ရောက်နှိုင်လဲဆိုတော့…
ပြည်တွင်းမှာ… လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့…. ဒေါ်လာဈေး…. အပြောင်းအလဲများမှာလည်း….
အိမ်ခြံမြေ လုပ်ငန်းများမှ တစ်ဆင့်…… အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီ၍
၀င်ရောက်လာခဲ့သည့်…. အပေါ်တွင်…. သက်ရောက်မှု ရှိနေပါတယ်….
အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်……ဈေးကစားမှုတွေကြောင့်… ငွေကြေး ဈေးကွက်မှာ
အကျိုးဆက်တွေဟာ…. ထုတ်လုပ်သူ…. တောင်သူများအပေါ်သို့…..
ထိခိုက်လာပါတယ်….မြန်မာ့လူဦးရေ၏…. ၆၇ ရာခိုင်နှုန်းမှာ….
ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်… ပို့ကုန်ဈေးကွက်မှာ…. လယ်ယာထွက် ကုန်….
စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်၊ ရေလုပ်ငန်း…ထွက်ကုန်ကဲ့သို့ ပို့ကုန်အမယ်….
များနှင့် လက်ခစား…. အပ်ကုန်စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်း…လည်ပတ်နေသော
အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများမှာ အဓိကကျပြီး… ငွေပြန်ဖော်ရာတွင်….
မူလရရှိနေသည့် ပမာဏ….နှင့် များစွာ ကွာဟနေသောကြောင့်….
၀င်ငွေလည်း လိုက်ပါကျဆင်းနေကာ ….ပို့ကုန်လုပ်ငန်းတွေ…
လည်ပတ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး… လုပ်ငန်းရှင်လက်မှာ လည်းငွေမရှိ….
ပို့ကုန်ကလည်း ကျဖြစ်နေတဲ့အခါ… အလုပ်သမားတွေ…..တောင်သူတွေ ထိပါတယ်…..
ပဲဈေး ကျနေပြီ… မတ်ပဲနဲ့ ပဲစင်းငုံ။ဆန်ဈေးတက်မလာဘူး….
စပါးဈေးကတော့ အနိမ့်ဈေးမှာပဲ သွားနေတုန်းပဲ…ဆိုရင်…
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်ကလည်း….. သူရှင်သန်နိုင်တဲ့အတိုင်း အတာထိပဲ….
ရတဲ့ဈေးကကျတယ်၊ တောင်သူတွေဝယ်သုံးရတဲ့…. သွင်းအားစုဖြစ်တဲ့…
ဓာတ်မြေသြဇာဈေးကျလား၊ တခြားပစ္စည်းဈေးတွေကျလား ဆိုတော့ မကျဘူး…
တောင်သူတွေဟာ ရာသီဥတုကြောင့် တစ်မျိုး….ငွေဈေးကြောင့် တစ်မျိုး …
အသက်ရှင်နေထိုင်ကြရမှာလဲ… ဓာတ်ဆီကစလို့ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ စတာ တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေက…
စင်ကာပူက.. ဈေးနဲ့အတူတူလောက် ဖြစ်နေတာ တွေ့ရတယ်…
စင်ကာပူမှာ..သူတို့ရောင်းတာတွေက အစားအသောက်တွေကအစ သွင်းကုန် တွေ များတယ်…
ဒီမှာက…ကိုယ့်နိုင်ငံထွက်တွေကိုပဲ ရောင်းတာပေမယ့် ဈေးမြင့်နေတယ်။
ထို့အတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ
သုံးသန်းကျော်ရှိပြီး နိုင်ငံခြား မှပြန်လည်ပေးပို့သော လုပ်ခလစာ များမှာမူ
ငွေပြန်ဖော်ရာတွင် မူလရရှိနေသည့် ပမာဏနှင့် များစွာ ကွာဟနေသောကြောင့်
၀င်ငွေလည်း လိုက်ပါကျဆင်းနေကာမိသားစုများလည်း အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်..
ဒီကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့ ဘယ်လိုစားသောက် အသက်ရှင်နေသလဲဆိုတာ အံ့သြ စရာပဲ။
လူတွေက အခုထိလည်းကာလတိုဈေးကွက်ထဲက ရုန်းမထွက်နိုင် ကြဘူး….
မတရား အခွင့်အရေးရနေတဲ့သူတွေက ခေတ်နောက် ပြန်ဆွဲနေတယ်…
ဒါ့ကြောင့်…အိမ်ခြံမြေ လုပ်ငန်းများမှ တစ်ဆင့်…. အမေရိကန်….
ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီ၍ ၀င်ရောက်လာခဲ့သည့် အပေါ်တွင် သက်ရောက်မှု
ရှိနေပါတယ်…။ ဈေးကွက်မှာ ဒေါ်လာဈေးကျတယ်ဆိုရင် ပြည်တွင်းမှာတင်
မဟုတ်ဘူး ပြည်ပမှာလည်းကျရပါတယ်။ ဒေါ်လာဈေးတွေကျနေပြီဆိုရင်..
အပြင်မှာ ကျလို့ကျတာလား၊ ဘာကြောင့် ကျတာလဲ
ဒေါ်လာဈေးက တစ်ကမ္ဘာလုံး လိုက်ကျလို့ကျတာ လား.... ပြည်တွင်းမှာ
ဒေါ်လာငွေ အ၀င်များရင် …ရောင်းလိုအားများပြီး ၀ယ်လိုအား နည်းနေရင်… ဒီပြဿနာ ရှိပါတယ်
ဒါပေမဲ့.. အိမ်ခြံမြေ လုပ်ငန်းများမှ တစ်ဆင့်…. အမေရိကန်….
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများနှင့်အတူ ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ ထိခိုက်လာပါတယ်…
ဥပမာ ပဲဆန်၊ ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းတွေ မှာ တောင်သူဆီကိုသွားပြီး
ဒီအကျိုးဆက်က ရောက်သွားမယ်။ တောင်သူမှာ အရင်းအနှီး မရှိရင်ထုတ်လုပ်မှုကို
ထိခိုက်ပြီး စားသုံးမှုကို ထိခိုက်မှာပါ။ နောက်ပြီး အထည်ချုပ်လို ဟာမျိုးတွေ၊
စက်ရုံတွေမှာဆိုရင် အလုပ်သမား တွေ ရှိတယ်။ သူတို့အထိနာမယ်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှု တိုက်ဖျက်ဖို့
လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အထဲမှာ ကုန်သွယ်မှု မူဝါဒတစ်ခုတည်း
ပြောင်းလဲလို့မရဘူး။ ငွေကြေးစနစ်၊ ငွေကြေးမူဝါဒပါ ပြောင်းလဲမှရမှာပါ…
ဘယ် ကရလာတဲ့ငွေနဲ့ ဘယ်သူရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာလဲ ဆိုတဲ့ ဇစ်မြစ်ကို အရင်..သိအောင်လုပ်ရမှာပါ..
ဒါတွေ က ၀င်ငွေရလမ်း ဖော်ပြပြီးသားငွေ တွေလား၊ ပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်တွေက
အမည်ခံပြီးဆွဲတာလား၊ ဘယ်သူမှ လည်း မသိဘူး။
နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆယ်သက်စားမကုန်တဲ့ ချမ်းသာပြီးသား …..
လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထက် လုပ်ငန်းရှင်ငယ်လေးတွေကို ဦးစားပေးပြီးလက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ …..
ဒါပေမဲ့ အာဏာအလွဲသုံးသူတွေကတော့ မရှက်မကြောက်ချီတက်ဆဲပါပဲ…..
လူလတ်တန်းစားတွေ ထိခိုက်ရင်… ဆင်းရဲတဲ့လူအများစုတွေ ထိခိုက်ပါတယ်…
ဆင်းရဲမွဲတေမှုက အရင်းအမြစ် အကျဆုံးပြဿနာပါ… လူတန်းစားမညီမျှမှု….
အခွင့်အရေး မညီမျှမှုကနေ…. နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုတွေ၊ စီးပွားရေး မတည်ငြိမ်မှုတွေ…..
လူမှုရေး ပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်….အလုပ်ရှင် တော်တော်များများ ဟာ…..
သူတို့အတွက်ကိုက်အောင် ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ကြရတယ်….လျှော့တဲ့နေရာမှာ …..
တခြားလျှော့လို့မရတော့ လုပ်အားခမှာပဲ လျှော့ကြရတယ်….လုပ်ခ မြှင့်ဖို့တောင်းတဲ့…
အလုပ်သမားတွေ တောင်းဆိုသလောက် အလုပ်ရှင်တွေ မပေးနိုင်သေးပါဘူး…
ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ စီးပွားရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးဖို့…လိုပါလိမ့်မယ်…ယခင်က…
အခွင့်အရေးတွေ မတန်မဆ ရခဲ့ပြီး ဒီအခွင့်အရေးတွေ လက်လွတ်မှာစိုးလို့…
ဒီလူတွေဟာ… တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးမျက်နှာ မထောက်မထား…ပြဿနာတွေကို …
မီးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေ လုပ်နေကြဦးမှာပါဘဲ… စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ မြေနေရာတွေရှိသမျှ …..
အစိုးရအာဏာပိုင်တွေ နီးစပ်တဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေ လက်ထဲရောက်ကုန်သလို….
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရယ်၊ အဆက်အသွယ်ရယ် သတင်းကြိုတင် ဦးထားမှုတွေနဲ့ရယ်…
အခွင့်အရေးသမားတွေ…ကြောင့် လူလတ်တန်းစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း
အလုပ်အကိုင် မကောင်းပါဘူး…ပြည်သူတွေရဲ့ စီးပွားရေး အခြေခံကတော့ ပြောင်းလဲမလာပါဘူး…..
ရပေါက်ရလမ်း မဖော်ပြနိုင်တဲ့ မြေ၀ယ်ယူမှုတွေ…မြေဈေးကစားမှုတွေကြောင့်…
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး မြေဈေးဟာ လေးဆကနေ ခုနစ်ဆကြား တက်သွားခဲ့ပါတယ်…
အစိုးရပိုင် မြေ၊ ရုံးဌာနတွေ၊ စက်ရုံတွေဟာ… မြေဈေးကစားသူတွေ လက်ထဲကို…
မြေဈေးတက်တော့ တိုက်ခန်းဈေး၊ တိုက်ခန်းငှားခ၊ အိမ်ငှားခ တက်ပါတယ်…
ဈေးဆိုင်ငှားခတွေတက်ရင် စားသုံးသူတွေ ထိခိုက်နစ်နာပါတယ်…
မြေဈေး၊ အိမ်ဈေးဟာ အာဆီယံမှာ စင်ကာပူရဲ့ နောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ရှိနေပါတယ်…
ဒီမြေဈေးတွေနဲ့ ဘယ်လူလတ်တန်းစားတွေ နေပျော်မှာလဲ….
မြေဈေးကစားမှုတွေ၊ လယ်ယာမြေ အဓမ္မ သိမ်းယူမှုတွေကြောင့်..
ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ အထက်တန်းလွှာနဲ့ အောက်ခြေလူတန်းစားကြား ကွာဟမှုတွေကြီးထွား လာရပါတယ်…
လူအများစုမှာ စီးပွားရေး မပြေလည် ကျပ်တည်းသည့် ဒါဏ်ကို လူးလှိမ့်ခံနေကြရပါတယ်….
အထူးသဖြင့် ၀န်ထမ်းများနှင့် လက်လုပ်လက်စား နေ့စား အလုပ်သမားများ အတော် ကျပ်တည်းကြပါတယ်..
၀င်ငွေနှင့် ထွက်ငွေ မလုံလောက်ကြပါဘူး….. ဘဏ်တွေ၊ ကုန်ထုတ်အရင်းအနှီးဖြစ်တဲ့ ငွေကြေး၊ မြေ၊….
စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေ အားလုံးကို ခရိုနီတွေကပဲ ပိုင်ဆိုင်ပြီး အခုအစိုးရလက်ထက်မှာ….
မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက……
အရင် ဒေါ်လာသန်း ၅၀ လောက် ချမ်းသာသူက…… သန်း ၅၀၀ လောက်….
နေရင်းထိုင်ရင်းချမ်းသာကုန်တာမျိုးတွေပါ….ဘယ်သူတွေ အဂတိတရား လိုက်စားခဲ့ကြတယ်။
ဘယ်သူတွေ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာတော့ …ကာယကံရှင်တွေပဲ သိကြမှာပါ…
ဒါဟာ တိုင်းပြည်အတွက် အကြီးအကျယ် ထိခိုက်နစ်နာပါတယ်…..။
ယခင်က ဆားနဲ့ဆန်အိတ်တွေ ပေးလှူနေရတဲ့ လာအိုနိုင်ငံနဲ့ ဗီယက်နမ်တွေတောင်…..
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်ရေမြေနဲ့ လိုက်လျှောညီထွေမဲ့….
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့စေတနာ နှင့် ခေါင်းဆောင်တွေ…
တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် အများကြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပြီဆိုတာကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်….။
ဇော်ဝမ်းမောင်+++READ MORE+++CLICK ON+++
at 8/27/2013 07:22:00 AM
USA DU MYEN MUNG NA TSINYAM MASHA NKAU MYI ,NDAI ZWN RE SHAN JAK RUNG HKAN MU GALAW SHAKUT NGA AI LAM CHYE LU AI.
at 8/26/2013 07:04:00 PM
Click on link ( video )
ရှစ်ပြည်နယ် အရေးနှင့် ဗမာပြည်နယ် သတ်မှတ်ရေး ကိစ္စအပေါ် သဘောကွဲလွဲမှုများရှိ
at 8/26/2013 11:56:00 AM
ရှမ်းမူအခြေခံ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုလား၊ ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုလား၊ ရှစ်ပြည်နယ် အရေးနှင့် ဗမာပြည်နယ် သတ်မှတ်ရေး ကိစ္စအပေါ် သဘောကွဲလွဲမှုများရှိ
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများပြ မြေပုံ (Graphic:The New York Times)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ အရေအတွက်
၁။ ဗမာ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်း
၂။ ရှမ်း ၉ ရာခိုင်နှုန်း
၃။ ကရင် ၇ ရာခိုင်နှုန်း
၄။ ရခိုင် ၃ .၄ ရာခိုင်နှုန်း
၅။ ဗမာ-တရုတ် ၂ .၅ ရာခိုင်နှုန်း
၆။ မွန် ၂ ရာခိုင်နှုန်း
၇။ ကချင် ၁ .၅ ရာခိုင်နှုန်း
၈။ ကယား ၀ .၇၅ ရာခိုင်နှုန်း
၉။ ဗမာ-အိန္ဒိယ ၁ .၂၅ ရာခိုင်နှုန်း
၁၀။ အခြား ၄ .၅ ရာခိုင်နှုန်း
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ အသစ်ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးချိန်တွင် ၁၉၆၁ ခုနှစ် "ရှမ်းမူ" ကို အခြေခံသော ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်အတူ ရှစ်ပြည်နယ်အရေးနှင့် ဗမာပြည်နယ် သတ်မှတ်ရေးကို တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းအချို့က ပြောဆိုမှုများ ရှိလာခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ တိုင်းရင်းသားပါတီများဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ မဟာမိတ်အဖွဲ့ (UNA) က "ရှမ်းမူ" ကို အခြေခံသော ရှစ်ပြည်နယ်စနစ် ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအသစ် ရေးဆွဲရန် ဆန္ဒရှိနေပြီး ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) က ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသစ် ရေးဆွဲရာ၌ အမျိုးသားပြည်နယ်များ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းရန် ဆန္ဒရှိနေပါသည်။ မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ ငွေရတု အခမ်းအနားတွင်လည်း ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖော်ဆောင်ရေးအတွက် အာမခံချက်ရှိသော ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေတစ်ရပ် ပေါ်ထွက်ရေးကို အချက်တစ်ချက် အနေဖြင့် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။
တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း အချို့က ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ပေါ်ပေါက်လာသော လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပုံတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အချိုးကျပါဝင်မှု နည်းပါးနေခြင်းကို အကြောင်းပြုပြီး ရှစ်ပြည်နယ်အရေးနှင့် ဗမာပြည်နယ် သီးခြားသတ်မှတ်ရေးကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် ကြိုးပမ်းလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
"ဗမာပြည်နယ် သတ်မှတ်ရေး ဆိုတာတော့ ရှမ်းမူအရ ဆိုရင်တော့ ကယ်လီဖိုးနီးယားနဲ့ ၀ါရှင်တန်ဒီစီပေါ့။ အဲဒီမှာလည်း ဒီထက်ငယ်တဲ့ ပြည်နယ်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ အင်မတန်ငယ်တဲ့ ပြည်နယ်လေးတွေတောင်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နှစ်ဦးစီ ပေးကြတယ်။ ဥပမာ ပြည်နယ် ၅၀ ဆိုရင် ကိုယ်စားလှယ် ၁၀၀ ပေါ့။ အဲလိုနည်းနဲ့ သွားကြတာကိုး။ အခုလည်း ဗမာက ဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီး ကိုယ်စားလှယ်မျှတူ သွားသင့်တယ်။ အောက်လွှတ်တော် (ပြည်သူ့လွှတ်တော်) မှာက ဗမာအများစု ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဗမာက အမြဲတမ်း နိုင်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ အထက်လွှတ်တော်လို့ ခေါ်မလား၊ အောက်လွှတ်တော်လို့ ခေါ်မလား။ အဲဒီတော့ ဒီနှစ်ခုက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ထိန်းညှိတဲ့ သဘောပါ။ ငါက လူနည်းစု၊ ငါများရမယ်ဆိုတာ မပါပါဘူး။ အောက်မှာက ဗမာအမြဲတမ်း နိုင်တာပဲ။ အပေါ်မှာက လူနည်းစု များသည့်တိုင်အောင် ဗမာကလည်း မရှုံးပါဘူး။ ဒါညှိတဲ့ သဘောပဲ" ဟု ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးက ပြောပါသည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ ရှမ်းမူဆိုပြီး တင်လာတယ်။ ဒီကိစ္စကို အကြောင်းပြုပြီး စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတယ်၊ အာဏာသိမ်းပြီးတော့ ၁၉၆၄ မန္တလေးမှာ မြန်မာလူထု သဘောထားဆိုပြီး လုပ်တာရှိတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ ရှမ်းမူကို နိုင်ငံရေးနည်းအရ ချေဖျက်တဲ့ အနေနဲ့ မြန်မာကို တိုင်းခုနစ်တိုင်း ခွဲလိုက်တယ် . . . . .
"၁၉၆၂ မှာ တောင်ကြီးဖက်ဒရယ်မူတို့၊ ဦးနေ၀င်း လက်ထက်မှာ ခုနစ်ပြည်နယ် ခုနစ်တိုင်းဆိုတဲ့ဟာတွေက ဟိုးမူလ ပြည်နယ်ပြည်မမူနဲ့ သိပ်မကွာဘူး။ ဒါပေမဲ့ နည်းနည်း အခေါ်အဝေါ် ပြောင်းတာပဲ ဖြစ်သွားပြီးတော့ အမျိုးသား တန်းတူရေးဆိုတဲ့ ပေါ်လစီနဲ့ကျတော့ တစ်ခုမှ မအပ်စပ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသားတန်းတူရေး ပေါ်လစီနဲ့ အပ်စပ်ချင်တယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဗမာလူမျိုးကလည်း ဗမာအမျိုးသား ပြည်နယ်တစ်ရပ် လိုအပ်လာမယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ သီအိုရီအရ စဉ်းစားတာပေါ့" ဟု ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) ၏ ဒုတိယ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ပြောကြားသည်။
ဗမာပြည်နယ် သီးခြားသတ်မှတ်ရေးနှင့် ရှစ်ပြည်နယ် အခြေခံမူသည် ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှ လက်ရှိအချိန်အထိ ခေတ်အဆက်ဆက် တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း အောင်မြင်မှု မရရှိခဲ့သော အဆိုတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၁ ခုနှစ် တောင်ကြီးညီလာခံ ကျင်းပခဲ့ခြင်းနှင့် ၁၉၆၂ တော်လှန်ရေးကောင် စီအစိုးရ အာဏာသိမ်းခဲ့ခြင်းကို ဖော်ပြခဲ့သော သတင်းများ
"ဖက်ဒရယ်ရဲ့ အစလို့ ပြောနိုင်တဲ့ ပင်လုံမှာတောင် နယ်မြေခွဲဝေမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကချင်တွေနဲ့ ညှိလို့မရလို့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ပြန်မယ်ဆိုပြီး ဖြစ်ခဲ့တာ ရှိတယ်။ နောက်တော့မှ ကချင်ခေါင်းဆောင်တွေ ဘက်ကလည်းလျှော့၊ ဗိုလ်ချုပ်ဘက်ကလည်း လျှော့နဲ့ ဖြေရှင်းခဲ့ရတယ်။ ဆိုလိုတာက ဖက်ဒရယ်လို့ ပြောနေကြပေမယ့် သိပ်တော့လွယ်လှတာ မဟုတ်ဘူး။ နောက်တော့ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ ရှမ်းမူဆိုပြီး တင်လာတယ်။ ဒီကိစ္စကို အကြောင်းပြုပြီး စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတယ်၊ အာဏာသိမ်းပြီးတော့ ၁၉၆၄ မန္တလေးမှာ မြန်မာလူထု သဘောထားဆိုပြီး လုပ်တာရှိတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ ရှမ်းမူကို နိုင်ငံရေးနည်းအရ ချေဖျက်တဲ့ အနေနဲ့ မြန်မာကို တိုင်းခုနစ်တိုင်း ခွဲလိုက်တယ်" ဟု ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်က ပြောကြားသည်။
၁၉၆၁ ခုနှစ် တောင်ကြီးမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ညီလာခံ၌ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေး (ရှမ်းပြည်နယ်ဆိုင်ရာ) ကြိုးကိုင်ကော်မတီမှ "ဖက်ဒရယ်မူ" စာတမ်းကို တင်သွင်းခဲ့ပြီး ဗမာပြည်နယ် ဖွဲ့စည်းရေး (ရှစ်ပြည်နယ်မူ) ကို တရားဝင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်က ကန့်ကွက်မှုများ ရှိခဲ့သည့်နည်းတူ ရှမ်းမူသည် အပြောလွယ်သလောက် လက်တွေ့ဖော်ဆောင်ရန် ခက်ခဲပြီး "ဗမာမုန်းတီးရေး စိတ်ဓာတ်" ကို အခြေခံသည်ဆိုသော တုံ့ပြန်ချက်များ ရှိခဲ့သည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်နှင့် မတ် ၁ ရက်များတွင် ရန်ကုန်မြို့ အသံလွှင့်ခန်းမ၌ ပြုလုပ်သော ဖက်ဒရယ်မူ ဆွေးနွေးခြင်း လူမျိုးပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် ပြည်နယ်များ ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ စ၀်ခွန်ချိုက "ရှမ်းမူ" ကို အခြေခံသော ဖက်ဒရယ်မူကို ထောက်ခံတင်သွင်း ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ "ရှမ်းမူ" ကို ဒူဝါဇော်လွန်း၊ ကပ္ပတိန်မန်းတုံးနုံး၊ ဦးထွန်းမြင့် (တောင်ကြီး)၊ ဦးစိန်တို့က ထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ပမညတပါတီမှ သခင်ချစ်မောင်၊ ဖဆပလပါတီမှ ဦးဗဆွေတို့က မထောက်ခံသည့်ဘက်မှ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ထိုအချိန်က ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော ပထစ (ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့ချုပ်အစိုးရ) ကိုယ်တိုင် "ရှမ်းမူ" ကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ပထစအစိုးရလက်ထက် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများအကြား "ရှမ်းမူ" ကို အခြေခံသော ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကိစ္စရပ် အပြန်အလှန် ပြောဆိုမှုများ ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ် ၂ ရက်တွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်းဦးဆောင်သော တပ်မတော်က နိုင်ငံတော်အာဏာကို သိမ်းယူလိုက်ပြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနုအပါအ၀င် အစိုးရ၀န်ကြီးများ၊ ဖက်ဒရယ်မူနှင့် ပတ်သက်သော လူမျိုးပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သော တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် လူမျိုးစုလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌများကို ဖမ်းဆီးလိုက်ပါသည်။
ထို့အပြင် တော်လှန်ရေးကောင်စီ လက်ထက်မှ နောက်ပိုင်းကာလ တစ်လျှောက်တွင် ဖက်ဒရယ်ကို ဆွေးနွေးခွင့်များ ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း တိုင်းရင်းသားများ၏ "ဗမာမုန်းတီးရေး စိတ်ဓာတ်" မှာ ပိုမိုပြင်းထန်လာပြီး လက်ရှိအချိန်တွင်လည်း ဗမာမုန်းတီးရေး စိတ်ဓာတ်ကို အခြေခံသည်ဟု ဝေဖန်ခြင်းခံခဲ့ရသော "ရှမ်းမူ" ဆင့်ပွားဖက်ဒရယ်မူကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရန် ကြိုးပမ်းလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရှုပ်ထွေးမှုသို့ ဦးတည်လာသော ရှစ်ပြည်နယ်
ပင်လုံမူအရ ရှမ်းနယ်မြေ၊ ကချင်နယ်မြေ၊ ကရင်နီနယ်မြေ၊ ချင်းနယ်မြေတို့ကို ဗမာပြည်မနှင့် ပူးပေါင်းကာ ပြည်ထောင်စုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး တော်လှန်ရေးကောင်စီ အစိုးရလက်ထက်တွင် ပြည်နယ်ခုနစ်ခု၊ တိုင်းခုနစ် စုစုပေါင်း ၁၄ ခုဖြင့် ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံအရ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ၁၄ ခုကို နှစ်ကာလရှည်ကြာ ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း အသားကျနေချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုပုံစံကို ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ရန်မှာ မလွယ်ကူသော အခြေအနေ တစ်ရပ်အဖြစ် ရှုမြင်ကြပါသည်။
ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့စည်းပုံကို နယ်မြေဒေသအလိုက် ခွဲခြားခြင်း မဟုတ်ဘဲ လူမျိုးစုအနေဖြင့် ခွဲခြားမည် ဆိုပါကလည်း တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု (၁၃၅) မျိုး နေထိုင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှုပ်ထွေးမှုများ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
လူမျိုးစု အနေအထားဖြင့် ကြည့်မည်ဆိုပါက တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအရ ဗမာတိုင်းရင်းသား အရေအတွက်မှာ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အများဆုံးရှိနေပြီး ရှမ်းတိုင်းရင်းသား အရေအတွက်မှာ ကိုးရာခိုင်နှုန်းနှင့် ကရင်တိုင်းရင်းသား အရေအတွက်မှာ ခုနစ်ရာခိုင်နှုန်း၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား အရေအတွက်မှာ ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေပါသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ တိုင်းဒေသကြီးအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်သော တိုင်းခုနစ်တိုင်းတွင် ဗမာအများဆုံး နေထိုင်လျက်ရှိနေပြီး ကျန်ရှိသော တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ်များတွင် ဗမာတိုင်းရင်းသားများအပြင် ဗမာသွေးနှော တိုင်းရင်းသားများစွာ နေထိုင်နေကြပါသည်။
"ရှုပ်ထွေးသွားတာပေါ့။ ကျွန်တော်လက်မခံဘူး။ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံး အနေနဲ့က ဗမာပြည်မကြီး အနေနဲ့ပဲ ရှိနေရမယ်။ ဒီထဲမှာ ချင်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ် ဒီလိုဟာမျိုးလာပေါ့။ လက်ရှိအတိုင်းပေါ့။ ဗမာကပြည်နယ်လေး တစ်ခုအနေနဲ့ ဗဟအစိုးရ ဖွဲ့မယ်ဆိုရင် ဒါဟာသိပ်ပြီး လက်ခံနိုင်၊ လက်ခံသင့်တဲ့အရာ မဟုတ်ဘူး" ဟု အသက် ၉၂ နှစ် အရွယ်ရှိ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေး သမားဟောင်းကြီး သခင်ချန်ထွန်းက ပြောပါသည်။
"နိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ လူတွေက အတိတ်ပေါ်မှာ အခြေခံပြီး တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ အတိတ်ကာလတုန်းက သူတို့ဘုရင်နဲ့၊ သူတို့စော်ဘွားတွေနဲ့ သူတို့အုပ်ချုပ်သူနဲ့ သူတို့နေထိုင် ခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ အရင်အတိုင်းပဲ ရှိရမယ် ဆိုတာလေ။ ဒါကိုကျွန်တော် လေးစားပါတယ်၊ တိုင်းရင်းသား တန်းတူညီမျှရေးတို့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တို့ကို။ သို့သော် ကာလအလိုက် ပြောင်းလဲနေတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာရှိတဲ့ လူဦးရေ အချိုးအစားအရဆိုရင် အချို့က တိုင်းရင်းသား နာမည်နဲ့ ပြည်နယ်ကို ဖွဲ့စည်းထားပေမယ့် အထဲမှာ အခြားလူမျိုးစုတွေ ရှိတယ်။ ဥပမာဆိုရင် ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ကချင်ကတစ်ဝက်လောက်ပဲ ရှိတယ်။ အခြားရှမ်းတွေ၊ မျိုးနွယ်စုတွေက တစ်ဝက်လောက် ရှိနေတယ်။ ကျွန်တော် ဆိုလိုတာက လက်မခံဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ သတိထားဖို့ ပြောတာပါ" ဟု ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ဦးကိုကိုကြီးက ပြောကြားသည်။
ရှစ်ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) ၁၂ ပြည်နယ်
ရှစ်ပြည်နယ်နှင့် ဗမာပြည်နယ် သီးခြားသတ်မှတ်ရေး ကိစ္စသည် ခေတ်အဆက်ဆက် အောင်မြင်မှု မရရှိခဲ့သော အဆိုဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပြည်ထောင်စုကို ရှစ်ပြည်နယ်နှင့် အထက်ဖွဲ့စည်းရေး ပုံစံကို တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းအချို့က တင်ပြမှုများ ရှိလာခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်းက ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေရေး (မူကြမ်း) ရေးဆွဲရေးနှင့် ညှိနှိုင်းကော်မတီက ၎င်းတို့ရေးဆွဲခဲ့သည့် မူကြမ်းတွင် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုတွင် အမျိုးသားပြည်နယ် ၁၂ ပြည်နယ် ဖွဲ့စည်းရန် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စု၏ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သော ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း ၁၄ ခုကို ဖျက်သိမ်းပြီး ကချင်အမျိုးသားပြည်နယ်၊ ကရင်အမျိုးသား ပြည်နယ်၊ ကရင်နီအမျိုးသား ပြည်နယ်၊ ချင်းအမျိုးသား ပြည်နယ်၊ ဗမာအမျိုးသား ပြည်နယ်၊ မွန်အမျိုးသား ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီ အမျိုးသားများ ပြည်နယ်၊ ရခိုင်အမျိုးသား ပြည်နယ်၊ ရှမ်းအမျိုးသား ပြည်နယ်၊ ဧရာဝတီအမျိုးသားများ ပြည်နယ်နှင့် အမည်ဖော်ပြခဲ့ခြင်း မရှိသေးသော အခြားအမျိုးသား ပြည်နယ်နှစ်ခု အပါအ၀င် အမျိုးသားပြည်နယ် စုစုပေါင်း ၁၂ ခု ဖွဲ့စည်းရန် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော လူမျိုးပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ - ဟံသာဝတီသတင်းစာ ၂၅-၂-၁၉၆၂ ထုတ်)
"ကျွန်တော်တွေ့တာကတော့ တိုင်းခုနစ်တိုင်း၊ ပြည်နယ်ခုနစ်ပြည်နယ် အခုကျတော့ တိုင်းဒေသကြီး ခုနစ်ခုနဲ့ ပြည်နယ်ခုနစ်နယ် ဒီမူတွေအားလုံးက ပြည်ထောင်စု မဟုတ်သေးတာကို တွေ့ရတယ်လေ။ ဒါကြောင့် တောင်ကြီးမူလို ရှစ်ပြည်နယ်မူ ဆိုရင်လည်း ethnic base မဟုတ်ဘဲနဲ့ multiethnie နယ်တွေမှာ အခက်အခဲ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် multiethnie ပြည်နယ်တွေနဲ့ ethnic base ပြည်နယ်တွေပါ ပါလို့ရှိရင် ကျွန်တော်သိတာတော့ အကြမ်းဖျင်းပေါ့လေ။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ခုနစ်ပြည်နယ်ကနေ ၁၅ ပြည်နယ် ဒီလောက်ပဲ ရှိနိုင်တယ်ဗျ" ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ပြောကြားသည်။
၁၂ ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) ၁၅ ပြည်နယ် သတ်မှတ်ရန် ကြိုးစားမှုမှာလည်း ပို၍ရှုပ်ထွေးစေသော အခြေအနေများကို ဦးတည်စေသည်ဟု သုံးသပ်ကြပါသည်။
၁၄ ပြည်နယ် ၁၄ ယူနစ်
တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်း အချို့က ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်ရာ၌ ရှစ်ပြည်နယ်နှင့် ဗမာပြည်နယ် သီးခြားသတ်မှတ်ရေးကို ပြောဆိုလာချိန်၌ ကျန်ရှိသော တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများ ရှိထားပြီးဖြစ်သော ပြည်နယ်နှင့် တိုင်း ၁၄ ခု ပုံသဏ္ဌာန်ကို မဖျက်ဘဲ တိုင်းဒေသကြီးများကို ပြည်နယ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည့် ၁၄ ပြည်နယ်၊ ၁၄ ယူနစ်ပုံစံ လိုလားကြောင်း ပြောဆိုမှုများ ရှိနေပါသည်။
"ကျွန်တော်တို့က ရှစ်ပြည်နယ်မူကို မကိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့က ၁၄ ယူနစ်ပေါ့။ တိုင်းဒေသကြီး ဆိုတာတွေကို ၁၄ ပြည်နယ် လုပ်လိုက်။ လုပ်ပြီးတော့ အဓိကက ဘာလိုလဲဆိုရင် တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေး ရရှိဖို့နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်က အရေးအကြီးဆုံးပဲ။ တကယ့်စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ပုံစံ ဖြစ်ရမယ်" ဟု ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်းက ပြောကြားသည်။
"နောက်တစ်ခုက အခုစိုးရိမ်ကြတဲ့ ခုနစ်ပြည်နယ်၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင် တိုင်းဒေသကြီးက ညီအစ်ကို ဗမာတွေက အများစုနေတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးက ခုနစ်ခု၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်မှာဆိုရင် ပြည်နယ်လည်း ခုနစ်ခု။ ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုမှ Balance လုပ်လို့ မရဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ အဲဒါကို ဗမာဖြစ်တဲ့ ညီအစ်ကိုတွေက သဘောထား ကြီးရမယ်။ အခုက အမျိုးသားလွှတ်တော် အတွက်ဆိုရင် တပြည်နယ်ကို ၁၂ ဦးစီမလား။ တစ်ကယ်လို့ Check and Balance ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားတွေနေတဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ ၁၈ ဦးစီပေးလိုက်။ ဗမာလူမျိုးတွေနေတဲ့ ပြည်နယ်တွေကို ၁၂ ဦးပဲ ယူလေ။ ဒါဆိုရင် အမျိုးသား လွှတ်တော်က Check and Balance ဆိုတဲ့ဟာက ဖြစ်သွားမယ်" ဟု ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
တိုင်းဒေသကြီး ခုနစ်ခုက ပြည်နယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ၁၄ ပြည်နယ် လုပ်ဆောင်မည့် အပိုင်းကို ရှစ်ပြည်နယ် လက်ခံသူများက လက်မခံနိုင်ကြောင်း ပယ်ချမှုများ ရှိပါသည်။
ရှမ်းမူ (ရှစ်ပြည်နယ်မူ) ကို အရင်တုန်းကလည်း သိပ်မထောက်ခံကြဘူး။ ဘာလို့ မထောက်ခံလဲဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ တန်းတူညီမျှမှုကို မဖြေရှင်းချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ တိုင်းရင်းသားတွေ တန်းတူညီမျှဖို့အတွက် ဒီပုံစံနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ မလိုဘူးလို့ ယူဆလို့ . . . . .
သို့သော် လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပြီး တိုင်းရင်းသားများ၏ တန်းတူရေးနှင့် ရပိုင်ခွင့်ကို အကောင်အထည် ဖော်ပေးနိုင်သည့် အာမခံချက် ရှိမည်ဆိုပါ ၁၄ ပြည်နယ် မဟုတ်သော ၁၄ ယူနစ် အဆိုကို လက်ခံဆွေးနွေးမည်ဟု ရှစ်ပြည်နယ် လိုလားသူများက ပြောကြားပါသည်။
"အမျိုးသား လွှတ်တော်မှာ တိုင်းရင်းသားတွေ ရထားတဲ့ အချိုးကို ပြင်ပေးမယ်။ ဥပမာအားဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုက နေရာ ၁၂ နေရာ ရထားတယ်။ တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ်တွေကိုလည်း နေရာ ၁၂ နေရာ ပေးထားတယ်။ အဲဒီအချိုးကို တိုင်းဒေသကြီးတွေက ၁၂ နေရာပဲယူ၊ တိုင်းရင်းသားတွေကို ၁၅ နေရာ၊ ၂၀ စသဖြင့် ပိုရအောင် တိုးပေးမယ်။ အဲဒီဟာကို တိုးပေးပြီး တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်ကိုလည်း အာမခံမယ်ဆိုရင် ၁၄ ယူနစ် ကိစ္စကို ကျွန်တော်တို့လက်ခံပြီး ဆွေးနွေးမယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတွေကို ပြည်နယ်အဖြစ် ပြောင်းလဲတာကိုတော့ မလိုချင်ဘူး။ လက်ရှိအတိုင်းတိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် ၁၄ ခု အတိုင်း ဆက်ပြီးသတ်မှတ် ပေးထားရမယ်" ဟု ရှစ်ပြည်နယ်မူကို ထောက်ခံသော တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် တစ်ဦးက ပြောကြားပါသည်။
ဗမာကို ပြည်နယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ရေးကိစ္စမှာ လူများစု ဗမာတိုင်းရင်းသားများ၏ သဘောထားအပေါ်တွင် မူတည်နေပါသည်။
"ရှစ်ပြည်နယ် လုပ်မယ်ဆိုတာကို ဗမာတွေက လက်မခံဘူး။ လူမျိုးစု အနေနဲ့ကလည်း ရှစ်မျိုးလား။ အစိုးရ လုပ်ထားတဲ့ ၁၃၆ မျိုးလား။ အဲဒါကလည်း ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်နေတယ်" ဟု ဦးဝင်းတင်က ဆိုပါသည်။
"ရှစ်ပြည်နယ် ပြည်ထောင်စုဆိုတဲ့ ဟာမျိုးက လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ နည်းနည်း အလှမ်းကွာဝေးနေတယ်။ အဓိကကတော့ အခုတိုင်းဒေသကြီး ခုနစ်ခုက ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ နောင်တော် ဗမာအမျိုးသားများက အများစုနေတဲ့ ဒေသပေါ့။ အရင်က ပြည်မပေါ့ဗျာ။ ဒါကို တိုင်းဒေသကြီး ခုနစ်ခု ပြန်ခွဲလိုက်တာပေါ့။ အဲဒါကို တိုင်းဒေသကြီး ခုနစ်ခုအဖြစ် သဘောထားမလား။ ပြည်နယ်လေး တစ်ခုအဖြစ် လျှော့ချမလား။ အဓိကကတော့ ကာယကံရှင် ဗမာအမျိုးသားများရဲ့ စနစ်အရပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ သဘောထားအပေါ်မှာလည်း အများကြီး မူတည်လိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ်" ဟု ကချင်နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဒေါက်တာတူးဂျာက ပြောကြားသည်။
ဦးဟန်ညောင်ဝေ (Euro Burma Office ဒါရိုက်တာ)၊ ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်း (SNDP ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရွက်ဆစ် (RCSS/SSA ဥက္ကဋ္ဌ)၊ ဦးခွန်ထွန်းဦး (SNLD ဥက္ကဋ္ဌ)နှင့် ဗိုလ်ချုပ်ဆေထဲင်န် (SSPP/SSA နာယက) (၀ဲမှယာ) တို့ကို ဇွန်လဆန်းပိုင်းက တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-SNLD)
"ရှမ်းမူ (ရှစ်ပြည်နယ်မူ) ကို အရင်တုန်းကလည်း သိပ်မထောက်ခံကြဘူး။ ဘာလို့ မထောက်ခံလဲဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ တန်းတူညီမျှမှုကို မဖြေရှင်းချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ တိုင်းရင်းသားတွေ တန်းတူညီမျှဖို့အတွက် ဒီပုံစံနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ မလိုဘူးလို့ ယူဆလို့။ ဆိုလိုတာက ရှစ်ပြည်နယ်၊ ကိုးပြည်နယ် စတဲ့ဖြေရှင်းမှုမျိုး မလိုအပ်ဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ နေကြတဲ့ ပုံစံက လူမျိုးပေါင်းစုံ အတူနေထိုင်တာ ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် တို့တွေနေတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းပေါ့။ ကရင်နဲ့ဗမာက လူဦးရေ အတူတူပဲ။ အဲဒါဆိုရင် ကရင်ပြည်နယ် ပြောမလား၊ ဗမာပြည်နယ်ပဲ ပြောမလား၊ အဲဒီမှာ စကားပြောစရာတွေ အများကြီး ဖြစ်လာတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှာ ဒီလိုပုံစံ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် သဘောမကျဘူး။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ တန်းတူညီမျှ ဖြစ်ရေးကိုတော့ သဘောတူတယ်။ တန်းတူညီမျှတော့ ဖြစ်ရမယ်။ တန်းတူညီမျှဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆွေးနွေးရမှာ ဖြစ်တယ်" ဟု ၁၉၆၂ ခုနှစ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင် ဦးလှရွှေက ပြောကြားသည်။
"ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တာက ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ ထူထောင်ဖို့ပေါ့။ ဖက်ဒရယ်ရဲ့ အနှစ်သာရကိုက ကိုယ့်မူ၊ ကိုယ့်မြေ၊ ကိုယ့်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ နေဖို့ဆိုတော့ ပြည်နယ်ကိစ္စ ဆိုတာက ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေ ပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ သူတို့ဟာသူတို့ ခုနစ်ပြည်နယ်နဲ့ နေမလား၊ ရှစ်ပြည်နယ်နဲ့ နေမလား။ သူတို့ကြမ္မာ သူတို့ဖန်တီးမယ်လေ။ အဲဒါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမြင်ပဲ။ ကျွန်တော်တို့က လူသစ်တွေဆိုတော့ အိုင်ဒီယာသစ်တွေနဲ့ ချဉ်းကပ်တယ်။ လူဟောင်းတွေကျတော့ အိုင်ဒီယာ ဟောင်းတွေနဲ့ပဲ ဒီယန္တရားကို လည်ပတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်" ဟု ချင်းအမျိုးသားပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇိုဇမ်က ပြောကြားသည်။
ရှစ်ပြည်နယ်မူကို ဗမာတိုင်းရင်းသားများက လက်မခံပါက လက်ခံနိုင်သည်အထိ ဆွေးနွေးမည်ဟု ဦးခွန်ထွန်းဦးက ပြောကြားသည်။
"လက်မခံနိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ လက်ခံနိုင်သည်အထိ စားပွဲဝိုင်းမှာ ဆွေးနွေးရမှာပဲလေ။ (တပ်မတော်က) အာဏာသိမ်းဖို့ စဉ်းစားမယ် ဆိုရင်လည်း လုပ်မယ်ဆို လုပ်လို့ရတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးက ရှိဦးမယ်။ ကျွန်တော်တို့က ထွက်ပြေးလို့ မရဘူး။ ဖမ်းမယ်ဆိုလည်း လိုက်သွားရုံ ရှိတာပဲ" ဟု ဦးခွန်ထွန်းဦးက ဆိုပါသည်။
စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်သည်သာ အဓိက
"ရှမ်းမူ" ကို အခြေခံသော ဖက်ဒရယ်မူအရ ရှစ်ပြည်နယ် သတ်မှတ်ရေးနှင့် ဗမာပြည်နယ် သီးခြားသတ်မှတ်ရေးကို တောင်းဆိုမှုများ ရှိနေချိန်တွင် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်မူ၏ အနှစ်သာရဖြစ်သော တန်းတူရေး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုသာ ရရှိမည် ဆိုပါက ရှစ်ပြည်နယ်ကိစ္စနှင့် ဗမာပြည်နယ် သီးခြားသတ်မှတ်ရေးတို့မှာ အရေးမပါသော အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်မည်ဆိုသော သုံးသပ်မှုများ ရှိပါသည်။
"ရှစ်ပြည်နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီမိုကရက်တစ် ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြောချင်တာက တန်းတူညီမျှရဖို့၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် ရဖို့ကို လိုချင်တယ်" ဟု ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ဦးမင်းဇေယျာက ပြောကြားသည်။
တချို့ဖက်ဒရယ်စနစ် တိုင်းပြည်တွေမှာ ဒီမိုကရက်တစ် စနစ်ကို မသုံးဘဲနဲ့ အာဏာရှင်စနစ်တို့၊ ဆိုရှယ်လစ် ကွန်မြူနစ်စနစ်တို့၊ တစ်ပါတီစနစ်တို့လို သုံးတဲ့အတွက် တချို့ဖက်ဒရယ် တိုင်းပြည်တွေက ပြိုကွဲခဲ့ရတာ ရှိတယ်။ ဒါက နိုင်ငံရေး စနစ်အမှားကြောင့် ဖြစ်တာ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေး စနစ်ကိုလည်း အမှားခံလို့ မရဘူး။ နိုင်ငံရေး စနစ်ကလည်း ဒီမိုကရက်တစ် နိုင်ငံရေးစနစ်ဖြစ်ဖို့ လိုတယ် . . . . .
"အရေးကြီးတာက ဘာလဲဆိုတော့ ဖက်ဒရယ်အဆင့် သွားဖို့က အာဏာခွဲဝေမှုက အဓိကပဲ။ ဗဟိုအစိုးရကနေ ပြည်နယ်အစိုးရကို အာဏာခွဲဝေရေး ပြေလည်သွားမယ်၊ မျှတသွားမယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ကြမှာပဲ။ ကိုယ့်ပြည်နယ်မှာ ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးခွင့်ပဲ။ အရေးကြီးတာက ပြည်နယ်သားတွေ သူတို့လိုချင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး အခွင့်အရေး ပေးနိုင်ဖို့ပါပဲ။ အဲဒါ ပေးလိုက်ရင် ကျန်တဲ့ပြဿနာတွေ သူ့ဟာသူ ပြေလည်သွားလိမ့်မယ်။ အခုအချိန်မှာ ဘာမှဒါတွေက မထင်ရှားသေးတဲ့ အချိန်ကျတော့ ဟိုဟာဖြစ်ရမယ်၊ ဒီဟာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး ဆန္ဒတွေ ဖော်ထုတ်နေကြတာပေါ့။ ခုနပြောတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့် ရောက်လာရင် ကျေနပ်သွားမယ့် လူတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်" ဟု ဒေါက်တာတူးဂျာက ဆိုသည်။
"ရှစ်ပြည်နယ်ပဲ ပြပြ၊ ဘယ်နှစ်ပြည်နယ်ပဲ ပြပြ၊ ငါးပြည်နယ် ပဲပြပြ၊ အရင်တုန်းက ငါးပြည်နယ်ပဲ ရှိတာကိုး။ ဘယ်လိုပဲပြပြ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ တန်းတူညီတူ အခွင့်အရေး မရှိရင် ဘာမှမထူးဘူး။ ကျွန်တော်တို့က တန်းတူညီတူ အခွင့်အရေး ရှိရမယ်။ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် ရှိရမယ်။ ကိုယ့်ဒေသ ကိုယ့်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိရမယ်။ အဓိကက ပြည်ထောင်စု လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ ပြည်နယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်။ ပြည်ထောင်စု လုပ်ပိုင်ခွင့်မှာ ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးက ပြည်ထောင်စု လုပ်ပိုင်ခွင့်ထား။ နိုင်ငံခြားရေးက ပြည်ထောင်စု လုပ်ပိုင်ခွင့်ထား။ ငွေရေးကြေးရေး၊ ပင်လယ်ရေကြောင်း၊ ပညာရေးတို့ကိုလည်း ပြည်ထောင်စုထား။ အဲဒီတော့ ပြည်ထောင်စု လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ငါးခုခြောက်ခုလောက်ထားပြီး ကျန်တာတွေအားလုံးကို ပြည်နယ်လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးလိုက်။ ဒါဆိုရင် တရားမျှတသွားမယ်။ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့ တန်းတူညီမျှရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်လည်း ဖြစ်လာမယ်" ဟု ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်းက ပြောကြားသည်။
ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုနှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး
"အခု ပြောနေတာတွေ အကုန်လုံးရဲ့ အချုပ်က ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေပေါ် မူတည်တယ်။ ဒီအခြေခံ ဥပဒေအရ ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ အခြေခံဥပဒေကို ဘယ်လိုပြင်ကြမလဲ။ အားလုံးပါဝင်တဲ့ ညီလာခံကြီး တစ်ခုကို လုပ်ရမယ်။ ဒီညီလာခံ ဖြစ်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုတောင်းဆိုမလဲ ဆိုတာကို အရင်ဆုံး စဉ်းစားဖို့ လိုတယ်။ အဲဒီညီလာခံကနေမှ ရလာတဲ့ အဖြေအရ လုပ်ကြရမှာပဲ ဖြစ်တယ်" ဟု ဦးဝင်းတင်က ဆိုပါသည်။
"အမှန်ကတော့ လက်ရှိရှိနေတဲ့ အခြေခံဥပဒေကို ဘာတွေဟာ ပြင်သင့်တယ်။ ဘာတွေဟာ မပြင်သင့်ဘူး ဆိုတာကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတဲ့ လူမျိုးစုံက ဆွေးနွေးပြီးတော့မှ ပြင်သင့်တာ ပြင်ဖို့ပဲ။ ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေ ခဏခဏ ဖျက်လိုက်၊ အသစ်ဆွဲလိုက် ဆိုရင်တော့ မကောင်းဘူး" ဟု သခင်ချန်ထွန်းက ပြောပါသည်။
"လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းမှာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတွေဟာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် တန်းတူရည်တူ ခွင့်တွေကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ရနိုင်သရွေ့၊ ရအောင် စနစ်တကျ ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက် သင့်တယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်တာ ဖြစ်ဖြစ်၊ အသစ်ရေးတာ ဖြစ်ဖြစ်မှာ အဲဒီ အခွင့်အရေးတွေကို တိတိကျကျ ဖော်ပြထားတာမျိုး ပါဝင်ဖို့ ၀ိုင်းဝန်းဆောင်ရွက် သင့်တယ်" ဟု နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးများ ရေးသားနေသူ ဒေါက်တာရန်မျိုးသိမ်းက ပြောကြားသည်။
ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ အနေဖြင့် မိမိတို့၏ လိုလားချက်များကို ပြင်းထန်သော အယူအဆများဖြင့် မတောင်းဆိုသင့်ဘဲ အားလုံးပါဝင်ပြီး နိုင်ငံရေး နည်းလမ်းအရ ပြုလုပ်သော စကားဝိုင်းများဖြင့် ဆွေးနွေးအဖြေရှာသင့်ကြောင်းနှင့် ပြင်းထန်သော အယူအဆများက ခရီးမပေါက်နိုင် ဖြစ်မည်ကို သတိထားသင့်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
တိုင်းရင်းသားများက ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ဖြစ်ပေါ်ရန် ခေတ်အဆက်ဆက် တောင်းဆိုခဲ့ရာမှာ လက်ရှိအချိန်တွင် ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်ရန်ဆိုသော တောင်းဆိုမှုများ ရှိနေပါသည်။ စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုနှင့် ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုသည် အဓိပ္ပာယ် မကွဲပြားသော်လည်း ဒီမိုကရေစီကို အခြေခံသော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပုံစံက ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း ပြောဆိုမှုများ ရှိပါသည်။
"ဒီဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်၊ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုလို့ ပြောလိုက်တာက ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာ ကျင့်သုံးမယ့် နိုင်ငံရေး စနစ်ပေါ့။ Political System က Democratic System ကို သုံးမယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တချို့ဖက်ဒရယ်စနစ် တိုင်းပြည်တွေမှာ ဒီမိုကရက်တစ် စနစ်ကို မသုံးဘဲနဲ့ အာဏာရှင်စနစ်တို့၊ ဆိုရှယ်လစ် ကွန်မြူနစ်စနစ်တို့၊ တစ်ပါတီစနစ်တို့လို သုံးတဲ့အတွက် တချို့ဖက်ဒရယ် တိုင်းပြည်တွေက ပြိုကွဲခဲ့ရတာ ရှိတယ်။ ဒါက နိုင်ငံရေး စနစ်အမှားကြောင့် ဖြစ်တာ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေး စနစ်ကိုလည်း အမှားခံလို့ မရဘူး။ နိုင်ငံရေး စနစ်ကလည်း ဒီမိုကရက်တစ် နိုင်ငံရေးစနစ်ဖြစ်ဖို့ လိုတယ်" ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ဆိုပါသည်။
"ကျွန်တော်တို့က သီအိုရီအရ ဆွေးနွေးတယ်ဆိုပေမယ့် ပြည်သူလူထုရဲ့ သဘောထားက အရေးကြီးလာတယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒ၊ သူတို့ရဲ့ အသံ။ အရေးအကြီးဆုံးပဲဗျ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တိုင်းပြည်မှာ Permanent Constitution တစ်ခု ပေါ်လာဖို့ဆိုရင် ပြည်သူလူထုရဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ သူတို့ရဲ့အသံ၊ သူတို့ရဲ့ဆန္ဒ ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သဘောပေါက်တယ်" ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖက်ဒရယ်စနစ် ဖော်ဆောင်ရာ၌ ရှစ်ပြည်နယ်နှင့် ဗမာပြည်နယ် သတ်မှတ်ရေးကို မိမိတစ်ဦးတည်း၏ အမြင်ဖြင့် မပြောလိုကြောင်း ဆိုပါသည်။
"အဲဒါက ဆွေးနွေးယူရမှာပဲ။ အန်တီတစ်ယောက်တည်း သဘောထားနဲ့ ဘယ်လိုပြောလို့ ရမှာလဲ။ ဒီပုံစံကို ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေအပြင် အခြားတိုင်းရင်းသားတွေရော ဘယ်လိုမြင်သလဲဆိုတာ ဟိုဘက်ဒီဘက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ရမှာပဲ" ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အချိုး
၂၀၀၈ ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ပြည်သူ့လွှတ်တော် (အောက်လွှတ်တော်)ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် မြို့နယ်ကို အခြေခံ၍ လည်းကောင်း၊ လူဦးရေကို အခြေခံ၍ လည်းကောင်း မြို့နယ် ၃၃၀ မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃၃၀ ဦး၊ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၁၀ ဦး စုစုပေါင်း ၄၄၀ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားလွှတ်တော် (အထက်လွှတ်တော်) ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တစ်ခုစီမှ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးစီ ပါဝင်စေပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေများ အပါအ၀င် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တစ်ခုစီအတွက် ကိုယ်စားလှယ် ၁၂ ဦးကျစီ တူညီစွာဖြင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၆၈ ဦး၊ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေများအပါအ၀င် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တစ်ခုစီအတွက် ကိုယ်စားလှယ် လေးဦးကျစီဖြင့် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၅၆ ဦး စုစုပေါင်း ၂၂၄ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းရမည်ဟု ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့် လူဦးရေနှင့် မြို့နယ်အရ ရွေးချယ်ရသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ ရရှိသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက်ကို တိုင်းရင်းသားများဘက်က ကန့်ကွက်ခြင်း မရှိသော်လည်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက်မှာ တိုင်းရင်းသားများအတွက် မျှတမှု မရှိကြောင်း ပြောဆိုမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ၁၄ ခုမှ ရွေးချယ်တင်မြှောက်သော အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက် ၁၆၈ ဦးတွင် တိုင်းရင်းသား ဒေသများမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက်မှာ ၈၄ ဦးသာ ပါဝင်ပြီး ကျန် ၈၄ ဦးမှာ ဗမာများ ဖြစ်နေသဖြင့် ထိုအရေအတွက်ကို မျှတမှုရှိစေရန် တိုင်းဒေသကြီးများကို ဖျက်သိမ်းပြီး ဗမာပြည်နယ် သီးခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့် ရှစ်ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရန် တောင်းဆိုမှုများ ရှိလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် လူဦးရေ၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်အလိုက်
စဉ် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အကျယ်အ၀န်း (စတုရန်းမိုင်) လူဦးရေ ခရိုင် မြို့နယ်
၁။ ကချင်ပြည်နယ် ၃၄၃၇၉ .၂၂ ၁၂၅၄၃၈၁ ၃ ၁၈
၂။ ကယားပြည်နယ် ၄၅၂၉ .၅၆ ၂၇၆၆၉၃ ၂ ၇
၃။ ကရင်ပြည်နယ် ၁၁၇၃၀ .၈၅ ၁၃၄၇၇၃၂ ၃ ၇
၄။ ချင်းပြည်နယ် ၁၃၉၀၆ .၉၇ ၄၈၇၃၆၁ ၂ ၉
၅။ မွန်ပြည်နယ် ၄၇၄၇ .၇၆ ၂၅၁၈၁၅၂ ၂ ၁၀
၆။ ရခိုင်ပြည်နယ် ၁၄၂၀၀ .၀၈ ၂၆၄၉၈၀၂ ၄ ၁၇
၇။ ရှမ်းပြည်နယ် ၆၀၁၅၅ .၂၃ ၄၆၇၅၅၅၅ ၁၂ ၅၄
၈။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၇၃၀၅ .၃၂ ၄၇၇၀၉၀၅ ၅ ၂၅
၉။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၁၄၆၅၀ .၈၇ ၆၉၃၅၃၅၇ ၈ ၃၀
၁၀။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၃၉၆၇ .၈၆ ၅၉၃၀၇၂၈ ၄ ၄၅
၁၁။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၃၆၅၃၄ ၅၄၄၉၉၃၄ ၈ ၃၈
၁၂။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၁၆၇၃၅ .၅၆ ၁၃၂၈၈၁၃ ၃ ၁၀
၁၃။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၁၅၂၁၃ .၃၃ ၄၉၇၇၉၆၆ ၄ ၂၈
၁၄။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၁၃၅၂၅ .၁၈ ၇၀၅၁၃၄၈ ၆ ၂၆
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက်၏ ယှဉ်ပြိုင်အရွေးခံ ကြသူများ
(၁) ကချင် ၉၃
(၂) ကယား ၃၃
(၃) ကရင် ၅၁
(၄) ချင်း ၅၅
(၅) စစ်ကိုင်း ၂၄၂
(၆) တနင်္သာရီ ၄၅
(၇) ပဲခူး ၂၅၅
(၈) မကွေး ၁၇၀
(၉) မန္တလေး ၂၉၇
(၁၀) မွန် ၉၅
(၁၁) ရခိုင် ၁၅၂
(၁၂) ရန်ကုန် ၄၀၀
(၁၃) ရှမ်း ၂၀၄
(၁၄) ဧရာဝတီ ၂၀၄
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု အခြေခံပါတီ ၃၆ ပါတီ၊ ကျောင်းသားလူငယ်ပါတီ ရှစ်ပါတီ၊ နိုင်ငံရေး သမားဟောင်းများပါတီ ၂၀ ပါတီ၊ နိုင်ငံရေး အရည်အသွေးစုံပါတီ ၂၉ ပါတီ၊ စုစုပေါင်း ၉၃ ပါတီ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် ကချင်ခြောက်ပါတီ၊ ကယားနှစ်ပါတီ၊ ကရင်သုံးပါတီ၊ ချင်းနှစ်ပါတီ၊ မွန်တစ်ပါတီ၊ ဗမာ ၅၇ ပါတီ၊ ရခိုင်ကိုးပါတီ၊ ရှမ်း ၁၂ ပါတီ၊ နာဂတစ်ပါတီ အစရှိသဖြင့် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ဗမာပါတီဖြစ်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က မဲဆန္ဒနယ် အများဆုံးတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသော ပါတီများနှင့် အနိုင်ရ ကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက်
စဉ် ပါတီအမည် ကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက်
၁။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၃၉၂ ဦး
၂။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၂၁ ဦး
၃။ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၁၁ ဦး
၄။ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ ၁၀ ဦး
၅။ မွန်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ၅ ဦး
၆။ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၄ ဦး
၇။ ကချင်ပြည်နယ်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် ၃ ဦး
၈။ ချင်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၃ ဦး
၉။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီပါတီ ၃ ဦး
၁၀။ ပြည်ထောင်စု ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ၃ ဦး
၁၁။ ကယားပြည်နယ် လူမျိုးပေါင်းစုံ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၂ ဦး
၁၂။ ကယန်းအမျိုးသားများ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ၂ ဦး
၁၃။ ဇိုမီး အမျိုးသားကွန်ဂရက် ၂ ဦး
၁၄။ နာဂတောင်တန်းဒေသတိုးတက်ရေးပါတီ ၂ ဦး
၁၅။ တအာဝ်း(ပလောင်) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၂ ဦး
၁၆။ ကမန် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၁ ဦး
၁၇။ ကရင်ပြည်နယ် အမျိုးသားများအဖွဲ့ချုပ် ၁ ဦး
၁၈။ ဒီမိုကရေစီပါတီ ၁ ဦး
၁၉။ ဒီမိုကရက်တစ် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရနှင့် ကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ ၁ ဦး
၂၀။ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၁ ဦး
၂၁။ ပြည်ထောင်စု ဓနုအမျိုးသား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၁ ဦး
၂၂။ ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားများ ဒီမိုကရေစီပါတီ ၁ ဦး
၂၃။ မရာ ပြည်သူ့ပါတီ ၁ ဦး
၂၄။ မြိုခေါ်ခမီ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ၁ ဦး
၂၅။ မျိုးချစ်ရဲဘော်ဟောင်းများအဖွဲ့ ၁ ဦး
၂၆။ ရှမ်းပြည်နယ် ကိုးကန့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၁ ဦး
၂၇။ လားဟူ အမျိုးသားဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ၁ ဦး
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်အလိုက် ပါတီများမှ အရွေးချယ်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များ
BY: Eleven-Read more+++click on